पानी तताउने सोलार वाटर हिटर किन्दै हुनुहुन्छ भने यी कुरामा ध्यान दिनुहोस । – erupse.com
पानी तताउने सोलार वाटर हिटर किन्दै हुनुहुन्छ भने यी कुरामा ध्यान दिनुहोस ।
सोलार वाटर हिटरले कसरी काम गर्छ ?
सोलार वाटर हिटरले मुलत: ‘कालो वस्तु (Black Body)’ को वैज्ञानिक सिदान्त अनुसार काम गर्छ। कालो वस्तु (Black Body) ले बढि घाम सोस्न सक्ने हुन्छ। कुनै पनि कालो वस्तुमा घाम परेपछि त्यो तापमा परिणत हुन्छ। त्यसैले ताप पैदा गर्न सोलार को कलेक्टर (घाम पर्ने ठाँउ) मा कालो रङ पोतिएको हुन्छ। हामीलाई कालो कपडा लगाउदा किन गर्मी महसुस हुन्छ भन्ने कुराको विज्ञान पनि यहि हो। कालो पोतिएको ताप सुचालक धातु चर्को घाम तिर फर्काएर राखेमा, त्यस्ले ताप पैदा गर्छ र धातु मा पैदा भएको ताप , धातुसँगै (वा भित्र) रहेको पानिले लिन्छ र त्यो पानि तात्छ।
बजारमा पाईने सोलार वाटर हिटरका प्रकारहरु
सोलार वाटर हिटरलाई कलेक्टरको प्रविधि अनुसार ३ किसिम मा राख्न सकिन्छ ।
फ्ल्याट प्लेट कलेक्टर
विश्व बजारमा सबै भन्दा बढि प्रयोग हुने र सोलार वाटर हिटरको सबै भन्दा पुरानो प्रविधि फ्ल्याट प्लेट कलेक्टर हो। यसमा पाईपहरुलाई absorber सँगै राखेर सिसाले ढाकिन्छ। Absorber को पछाडी भागमा ताप कुचालक ईन्सुलेसन गरिएको हुन्छ।
भ्याकुम ट्युव कलेक्टर
यस किसिमको कलेक्टरमा दुई वटा सिसाको पाईपलाई भित्र-बाहिर गरेर राखिएको हुन्छ। भित्रि पाईपमा पानि रहन्छ र कालो रङ पोतिएको हुन्छ भने बाहिरी सिसा लाई भ्याकुम गरेर ताप बाहिरी वातावरणमा नहराउने बनाईएको हुन्छ। यसको संरचना तातो पानी राख्ने थर्मस जस्तो बनाईएको हुन्छ। यो प्रविधिको आविष्कार पछि सोलार वाटर हिटर बजारले फड्को मारेको हो। पुरानो किसिमको सोलार वाटर हिटर भन्दा डबल प्रभावकारीता हुने भएकाले यो प्रविधि चाँडै लोकप्रिय बनेको छ।
यो प्रविधि भ्याकुम ट्युब किसिमको सोलार भन्दा अझ प्रभावकारी हुन्छ।यसमा भ्याकुम ट्युब भित्र तामाको पाइप अनि रिफ्लेक्टर राखेर absorber ले सोसेको तापलाई छिटो पानीमा पुर्याउन सक्ने क्षमता बनाईएको हुन्छ।
सोलार वाटर हिटर किन्दा के के मा ध्यान दिने ?
फ्ल्याट प्लेट कलेक्टर रोज्दै हुनुहुन्छ भने यी कुराहरु दाज्नुहोस
Absorber र पाईपहरु कुन धातुका छन, तामाको कि Galvanized Steel ?
GI को तुलनामा तामाको पाइपहरु हरु धेरै प्रभावकारी हुन्छन।
Absorber को रङमा black board paint लेपिएको छ कि selective coating ?
Black board paint हरु केहि वर्षमै उडेर खुईलिन्छन भने selective coating को आयु कम्तिमा २० वर्ष हुन्छ।
बनोट, केसिङ खिया लाग्ने छन् कि खिया नलाग्ने ?
सोलार कलेक्टर को केसिङ हावा नछिर्ने Airtight हुनुपर्दछ।
सिसा कस्तो छ ?
झ्यालमा राख्ने सिसा प्रयोग गरेको सोलारमा सुर्यको प्रकास परावर्तित हुन्छन।यसको मतलब धेरै प्रकास सोलारabsorber मा पर्न पाउदैनन्। त्यसैले सोलारमा कम भन्दा कम घाम परावर्तित गर्ने कडा सिसा भएको सोलार रोज्नु पर्छ।
भ्याकुम ट्युब सोलार वाटर हिटर रोज्दै हुनुहुन्छ भने यी कुराहरु दाज्नुहोस
कलेक्टर कोटिङ Tri-element coating हो कि होईन? Tri-element Coating लाई भ्याकुम ट्युवमा अहिलेसम्मकै अत्याधुनिक र उत्कृष्ट मानिन्छ।
ट्याङकीको धातुको स्तर SUS 316 ग्रेडको स्ट्यानलेस स्टिल हो कि होईन सोधौ । यो सबै भन्दा उत्कृष्ट स्टिल हो । सोलार वाटर हिटरको लागी अन्य तल्लो ग्रेडको स्टिलहरुमा लामो समयमा खिया आउने सम्भावना हुन्छ ।
ट्याङकीको पाताको मोटाई : घरयासी प्रयोजनमा हुने ३६० लिटर सम्मका सोलार वाटर हिटरहरुमा भित्रि ट्याङकी कम्तिमा 0.5 mm वा बढि भएको राम्रो हुन्छ।
फ्रेम : खिया नलाग्ने स्टिलको फ्रेम मात्र रोज्नु पर्छ।
चिसो ठाउँकोलागी कुन सोलार उपयुक्त हुन्छ ?
नेपालका हिमाली भेग र उच्च पहाडी जिल्लामा फ्ल्याट प्लेट सोलार वाटर हिटरमा पानि जम्ने समस्या आउछ भने भ्याकुम ट्युब सोलार हिटरमा पानि नतात्ने समस्या आउछ। त्यसैले उच्च हिमाली भेगको लागी हिट पाईप सोलार वाटर हिटर उपयुक्त र बिशेष प्रविधि हो।यसमा वाहिरी तापक्रम शुन्य भन्दा पनि न्युन हुँदा पनि पानि तातो राखने र थोरै घाम लाग्दा पनि पानि तताउन सक्ने क्षमता हुन्छ। यस किसिमको सोलारमा साह्रै कम मर्मत गर्नु पर्ने हुन्छ । उच्च हिमाली भेगमा सोलार जोड्दा पाईप हरु ईन्सुलेसन गर्नु पर्दछ।
जडान मा ध्यान दिनु पर्ने कुरा के के हुन ?
-सोलार जडान गर्दा सोलारलाइ जहिले पनि घाम नछेकिने गरी दक्षिण तर्फ फर्काएर राख्नु पर्छ।
-जडान गरेका पाईपहरु ईन्सुलेसन गर्नु पर्छ।
-सोलारको ट्याङकी भन्दा चिसो पानिको ट्याङकी १ फुट जस्तो माथी हुन उपयुक्त हुन्छ।
– भेन्ट पाईप राखिएको हुनुपर्छ। सकेसम्म ट्याङकि र आउटलेट दुवैमा ग्यास जाने भेन्ट पाईप राखेको राम्रो हुन्छ।
– सोलार जडान गर्ने प्राविधिकले सोलार कलेक्टरबाट ट्याङकीसम्म जाने पाईपलाई उभो तिर मात्रै लाग्ने गरि जोड्नु पर्छ।
बजारका हावादारी कुरा ?
नेपालमा ग्रहाकलाई गुमराहमा राख्ने खाले बजार व्याप्त छ यस्तो बजारमा सामान बिक्रेताले ग्रहाकलाई सहि जानकारी नदिई हावादारी कुराहरु बिच गुम्राहमा राख्छन्। सोलार वाटर हिटर बजारमा पनि यस्तै बिक्रताको बिगबिगी छ। राम्रा र ठुला ठानिएका सोलार वाटर हिटर कम्पनिले पनि धोका बेचिरहेका छन्।
टङकी स्टिल पाताको मोटाईका बिषयमा
सोलारको पानि बस्ने टङकी को बिषयमा त कसैले 1mm को भन्छन त, कसैले 1.5 mm सम्म पनि भन्न भ्याउछन्। वास्तबमा 0.5 mm भईदिए नै ठुलो हो,अधिकांस त 0.5 पनि हुदैनन्। यदि कसैले 1.5 mm को मोटाई भएको टंकी छ भन्छन भने त्यो सरासर झुट हो।
ट्युबको कोटिङको आयु १० वर्ष अधिकतम हो । तर यसको आयु निर्धारण गर्ने कुरा धेरै हुन्छन। कोटिङ के को हो, कस्तो मेसिनले पोतिएको हो, कुन प्रविधिले पोतिएको हो भन्ने कुराले नै कोटिङको आयु निर्धारण गर्छन्। व्यापारीहरु १५ वर्षको ग्यारेण्टि लेखेर दिन्छन। त्यो भ्रम मात्र हो, धेरै ग्यारेण्टि भने पछि ग्रहाकले आफुसँगै किन्छन भनेर वारेण्टि काल मनगण्न्ते रुपमा बढाउने होडबाजी चलेको छ यो बजारमा।
भ्याकुम ट्युब कम्सल प्रविधि हो भन्ने विषयमा
भ्याकुम ट्युबको बिषयमा भ्रम छ। नेपालमा भ्याकुम ट्युब प्रविधि कम प्रभावकारी भन्ने हल्ला पुराना मोडलका सोलार बनाउने हरुले फैलाएका हुन।नयाँ प्रविधिले आफ्ना पुराना ढर्रे प्रविधिलाई विस्तापित गर्ने हो कि भन्ने डरले गर्दा उनिहरु यस्ता हल्ला फैलाउदै हिड्छन। जबकी विश्व बजारमा भ्याकुम ट्युबलाई 3rd Generation प्रविधि भनिन्छ र उत्कृष्ट मानिन्छ। भ्याकुम गरिएको कारणले भित्रको ताप बाहिर प्रसारण नहुने र बाहिरको चिसो भित्र प्रसारण नहुने भएकाले भ्याकुम ट्युबहरु बढि प्रभाबकारी हुन्छन। तर बजारमा सहि जानकारी दिईदैन।
एउटा कुरा के सहि हो भने जुन स्थानमा वर्षा याममा हिलो पानि आउछ, त्यो हिलो थिग्रिएको कारणले भ्याकुम ट्युबहरु कम प्रभावकारी हुँदै जान्छन। त्यसकको समाधानको लागी ग्राहकले सकेसम्म हरेक वर्ष बर्षा याम सकिएपछि सफा गर्नु पर्दछ।
पानीको मात्राको बिषयमा
नेपालमा सबै भन्दा बढि गलत जानकारी सोलारको पानि ट्याङकीको क्षमता बारे सुनिन्छ।एउटै साईजको सोलार कसैले २६५ लिटरको भन्छन ,कसैले त्यसैलाई २९० लिटर पनि भन्छन। कुन सोलारले कति मात्रा पानि तताउछ भन्ने कुरामा बजारले घुमाउछ। वास्तवमा ट्युबको संख्या अनुसार कति पानी तात्ने मात्रा पत्ता लगाउन सकिन्छ। सजिलो सँग बुझ्दा १ ट्युव बराबर सरदर १० लिटर पानि तात्ने र पानि राख्ने ट्याङकीको क्षमता हुन्छ। यसको मतलब २० ट्युब मोडलको सोलारमा २०० लिटर पानी ट्याङकी हुन्छ।
थप जानकारी र सम्पर्कका लागि ९८५१०६८३१२ सूर्य